Sida loogu badalo midabka timaha muuqaal ahaan iyadoo la adeegsanayo Photoshop | Abuurista khadka tooska ah
Naqshadeynta qaabdhismeedka ayaa ah aag caan ka ah aqoonta maalmahan. Tani badanaa waa sabab kor u kaca ku yimid tikniyoolajiyadda hawlo badan oo hada lagu qaban karo iyadoo lagu saleynayo qalab casri ah ama kumbuyuutar.
Laga bilaabo xilligan, shaqada waxay kasbataa fikrado cusub illaa inta ay ku saabsan tahay ku-dhaqankeedu, soo saarista ikhtiyaarro aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay dadka jecel kombuyuutarka iyo dhammaan howlaha uu qalabkani daboolayo aad iyo aad iyo aad u badan maalmaha dhaafaya.
Maanta, naqshadeynta garaafku waa mid ka mid ah meelaha ugu caansan adduunka oo dhan iyo shaqadoodu waxay u oggolaanayaan dadka Abuur, tafatir oo wax ka beddel sawirada illaa inta male-awaalku oggolaado. Tani waxay la xiriiri kartaa dhammaan noocyada shaqooyinka, sida xayeysiinta, waxbarashada, naqshadeynta ama waxqabad kasta oo kale oo mudan isticmaalka barnaamijyada naqshadeynta.
Kordhinta xirfaddani waa mid aad u muhiim ah, waana sababta ay suurtagal u tahay in lagu ordo naqshadeeyayaasha bannaanka akadeemiyadda, kuwa go'aansan lahaa inay qaataan hoggaankooda barashada qaybtan aqoonta.
Ma ahan wado xun, maadaama ay suurtagal tahay in la helo kiisas dad leh diyaargarow ka weyn arday kasta oo naqshadeynta garaafyada ah, laakiin uma aan iman inaan ka hadalno arrintaas, maadaama aan halkaan u keenay casharro ah sida loogu beddelo midabka timaha sawir ahaan, oo u oggolaaneysa taageerayaashaas inay awood u yeeshaan inay farsamadan ku farsameeyaan daqiiqado gudahood.
Hadaad raadiso ku beddel midabka timaha sawir ahaan, waa inaad raacdaa talaabooyinka hoos ku xusan:
Waa inaan doorannaa sawirka ama sawirka aan dooneyno inaan wax ka bedelno timaha.
Waxaan sameyn doonaa lakabyo nuqul ah, abuurista asal iyo nuqul.
Waxaan dooran doonnaa ikhtiyaarka maaskaro dhakhsaha leh, annaga oo hubinayna in uu madow yahay midabka hore, iyo sidoo kale midab cad u ah asalka. Sidan oo kale, waxaan isku dari doonaa buraash jilicsan si loo rinjiyeeyo timaha.
Waxaan fureynaa maaskaro deg deg ah, wixii dambe midabada rogan oo fiirso sida aan ugu harnay timaha sawirka si aan u awoodo inaan wax ka bedelno.
Waxaan ku darnaa a lakabka isku dheelitirka midabka, kaas oo aan u badalidoono lakab goyn ah. Kadibna waxaan udhaqaaqeynaa qiimaha hooska, iftiiminta iyo dhexdhaxaadka illaa aan kaheleyno midabka aan jecel nahay, halkaas oo ugu dambeyntii, waxaan u badali doonnaa qaabka isku darka shaashadda
Waxaan ku darnaa lakab heerar ah sida maaskaro xoqan ka dibna waxaan beddeli doonnaa qiyamka, annagoo yareyneyna mugdiga u dhexeeya 10% iyo 15%.
Waa inaan hoos u dhignaa mugdiga illaa aan ka helno midabka la doonayo.
Kuwani waa tallaabooyinka ay tahay inaan qaadno si aan u beddelno midabka timaha sawir ah iyada oo loo marayo barnaamijka Adobe Photoshop. Ma ahan wax isku murugsan gabi ahaanba, isku dayga waxay noqon doontaa wax fudud oo xiiso leh, sidaa darteed ka soo kabashada waxaad ka heli doontaa farsamada sida ugu fiican ugu habboon dhadhankaaga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sida loogu badalo midabka timaha muuqaal ahaan Photoshop
Dib-u-hagaajinta sawir deg deg ah oo lala socdo Adobe Photoshop